Ekol Logistics iyo Talyaani UBV oo Talyaani ah ayaa Ku biira Ciidamada | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulKooxda Ekol Logistics iyo Kooxda UBV ee Talyaaniga ayaa ku biiraya Ciidamada
27 / 11 / 2019 34 Istanbul, 39 Talyaaniga, YURUB, DUNIDA, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Gobolka Marmara, TURKEY
dugsiga iyo Talyaani ubv kooxda awooda ayaa la isku daray
Shirkadda loo yaqaan "Ekol Logistics", ee sii wadaysa kobockeeda caalamiga ah, waxay heshiis muddo dheer la saxiixatay Kooxda UBV ee Talyaaniga. Ekol, ujeedadeedu tahay in la kordhiyo tayada adeegga iyada oo la ballaariyo laanta iyo shabakadda qaybinta, waxay horumarin doontaa howlaheeda gaadiid ee talyaaniga ee hay'adda UBV Group oo ka socota 2020.
UBV waa hogaamiyaha suuqa suuqyada kooxaynta caalamiga iyadoo leh tiro ka badan 130 milyan euro waxayna ku shaqeysaa xarumaheeda u gaarka ah dhammaan aagagga warshadaha ee muhiimka ah ee Talyaaniga.
Markii la qiimeynayay iskaashiga laba ciyaartoy oo rajo weyn ka leh suuqa Yurub, Gudoomiyaha Ekol Ahmet Muuse wuxuu cadeeyay in UBV Group iyo Ekol, oo khibrad kabadan 60 sano ka badan waaxda, ay leeyihiin astaamo la mid ah oo uu sheegay inay rabaan inay abuuraan mustaqbal fog labada shirkadood ee shaqaalaha iyo macaamiishaba.
Isagoo xusay in iskaashigu uu aad muhiim ugu yahay horumarka istiraatiijiyadeed ee Ekol ee suuqa Yurub, Mosul wuxuu yiri: “UBV waxay leedahay dhir u gaar ah aagaga warshadaha muhiimka ah ee Talyaaniga. Macaamiisha Ekol waxay ka faa iideysan doonaan tas-hiilaadka halkan waxayna kordhin doonaan wax soo saarka. Waxaan ka abuurnaa adeeg tayo sare leh goobaha ugu muhiimsan ee dalka Talyaaniga oo ay weheliso isku darka aqoonta UBV ee maxalliga ah iyo jiritaanka gobolka iyada oo la adeegsanayo istiraatiijiyadda saadka ee loo yaqaan 'Ekolistic logistics 4.0' iyo xalalka loo habeeyay. "
Isagoo sheegay inuu ku faanayo mashruucan wadajirka ah, Madaxweynaha UBV Group Pietro Porro wuxuu cadeeyay in Ekol uu soo maray tayo aan caadi aheyn oo kooxda Ekol iyo xarumaha shirkadaha kala duwan waxaana uu yiri: "Heshiiska, aqoonta cilmiga teknolojiyadda Ekol iyo adeegga maalinlaha ah ee yurubiyaanka ah ee 67 Waxaan ku daraynaa hadafka u adeegida. 10 ayaa noqotay shirkadda ugu horreysa ee gaadiidka safarka ka geysata ee ku teedsan qaaradda Yurub iyada oo loo marayo isku xirnaanta maalinlaha ah ee isticmaalka istiraatiijiyadda iyo wax soo saarka. Waxaan isku daraynaa khibradaha shaqaalaheena iyo fahamka Ekol ee heerka sare.
Baaxadda wada shaqeynta, Ekol wuxuu taageeri doonaa horumarinta UBV wadamada ay ka shaqeyso. Intaas waxaa sii dheer, Ekol waxay kordhin doontaa heerka ugu sarreeya ee hawlgalka iyadoo bixineysa rakibaadda xafiisyada jira ee UBV. Marka loo eego qorshayaasha kobaca ee labada shirkadood, amarka, oo hadda ah 150 kun sanadkii, waxaa la qorsheynayaa in lagu kordhiyo 300 kun oo dalab sanadkiiba saddex sano gudahood. dhalmo The lagu sameyn doonaa inta u dhaxaysa saacadaha Turkey iyo Italy 96.
UBV Group, oo leh shabakadeeda wakaaladda adduunka oo dhan, waxay bixisaa adeegyo gaadiid qaran iyo caalamiba xagga dhulka, hawada iyo badda oo ay ku uruurineyso aqoonteeda xarunta 141 ee Talyaaniga iyo dibedda.
Siemens iyo Mitsubishi waxay ku biiraan xoog si ay u bixiyaan Alstom
Yandex.Taxi iyo Uber, 6 waxay ku biireen ciidamada dalka
TCDD - ISKU XIDHIIDHA ISKUULKA
Gaadiidka TCDD iyo Isku-xirka Tareenka ee Jabuuti ayaa isku daraya awooddooda
Ogeysiinta Qandaraaska: 12 (laba iyo toban) bilood, oo ay leeyihiin 134 shaqaale, Madaxa kooxda hostess, hostess…
Ekol Logistics waxay soo saartaa line-tareenka Sete-Paris
Ekol Logistics waxay isku xireysaa Shiinaha ilaa Hungary maalinta 17
Waddada Silk Road waxay soo nooleeysaa waddada cusub ee Ekol Logistics
Gudoomiyaha Gobolka Giresun Ali Sahin oo ka soo jeeda Shirkadda Talyaaniga ee uu la shaqeynayay Mashruuca Wadooyinka